एक अर्कामा विलय होइन, पार्टीलाई नयाँ उचाइमा उठाउने हो – tvNEPALI
Posted on १६ पुष २०७४, आईतवार ०२:५६ December 31, 2017
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता जनअनुमोदित भइसकेको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा । अब चाहेर पनि दुवै पार्टी एकताबाट पछि हट्न नसक्ने उनको दाबी छ । महरासँगको राकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ । कुराकानीको केही अंश:
वाम गठबन्धन निर्माण, पार्टी एकता गर्नेदेखि सरकार गठनसम्म उत्तरको हात रहेको आरोप दक्षिणले लगाएको छ नि ?
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतहरुले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदा वा लेख नै लेखेर उत्तरको हात रहेको बताइरहेका छन् त ? त्यसलाई कसरी असत्य भन्ने ?
Posted in अन्तर्वार्ता Tagged एमाले र माओवादी केन्द्र, नेता कृष्णबहादुर महरा